दुब्लो भए भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् दुब्लो भन्दा मोटोपना हो रोगको भारी, जसले जानसक्छ ज्यान पनि – Etajakhabar
दुब्लो भए भनेर चिन्ता नगर्नुहोस् दुब्लो भन्दा मोटोपना हो रोगको भारी, जसले जानसक्छ ज्यान पनि
काठमाडौं – मोटोपन अथवा ओभर वेट हुनु खुसी र सुखको कारण सोच्नुभएको छ भने अब त्यस्तो भ्रमबाट बाहिर निस्कनुहोस् । बढी मोटोपन केही गम्भीर बिमारीको कारण पनि हुन सक्छ । हार्वर्ड स्कुल अफ पब्लिक हेल्थको अध्ययनअनुसार मोटो मानिस धेरै प्रकारका गम्भीर रोगको सिकार हुनुपरेको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा नयाँदिल्ली ओबेसिटी एक्सपर्ट डा. अञ्जली हुडा साँगवानका अनुसार पुरुषको कम्मर ४० इन्चभन्दा बढी र महिलाको ३५ इन्चभन्दा बढी हुनुलाई मोटोपन अथवा ओभर वेट भएको मानिन्छ । जब मानिस मोटाउँदै जान्छ, त्यो मानिसमा कुनै पनि प्रकारको गम्भीर रोग सुरु हुँदै छ भनेर बुझ्नुपर्ने अध्ययनले पुष्टि गरेको हो । यसबाहेक मानिसमा हाइटको हिसाबअनुसार वजन ज्यादा छ भने बिमारीको कारण बन्न सक्छ ।
कस्तो समस्या देखिन सक्छ ? मोटोपनका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिन्छ । त्यो मानिसमा मुटु, फोक्सो, किड्नी, लिबर, ब्रेनलगायका समस्या देखिन सक्छ ।
मानिस आवश्यकभन्दा बढी मोटो छ भने उसमा टेस्टोइस्टेरान हर्मोनको लेबल अथवा ब्लड सप्लाइमा कमी आउन सक्छ । मोटाउँदै जानु ब्लडमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुँदै जानु हो र कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै जानु हो । जसका कारण श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ ।
मुटुसम्म अक्सिजन र ब्लड पुग्न गाह्रो हुन सक्छ । यसको कारण हर्टअट्याकजस्तो गम्भीर रोगको सम्भावना देखिन सक्छ । मोटोपनका कारण ब्लडप्रेसर उच्च हुन सक्छ । २८ प्रतिशत महिला र २६ प्रतिशत पुरुषमा ब्लडप्रेसरको समस्या देखिएको छ । ब्रेनमा ब्लड सप्लाई हुन निकै गाह्रो हुन्छ । मोटोपनकै कारण मिर्गौलाले काम नगर्ने सम्भावना रहन्छ ।
शरीरमा मोटोपन बढ्दै जाँदा ग्लुकोजको इन्सुलिन नामक हर्मोन ठीक तरिकाले बन्न सक्दैन । यसले गर्दा सुगर लेबल बढेर डाइबेटिज हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन सक्छ । मोटो मानिसमा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको समस्या हुन सक्छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
मोटो मानिसको निद्रामा समस्या देखिन सक्छ । गर्दनको आसपासमा जम्मा भएको मोटोपनले श्वासनलीमा रोकावट हुन सक्छ । यसको कारण स्लिप एप्निया अर्थात् निद्रा नलाग्ने बिमारी हुन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ०८, २०७४ समय: ९:५१:१३